तपाईंलाइ थाहा छ ? सोयाबीनमा दूध, अण्डा तथा मासुभन्दा धेरै प्रोटीन पाइन्छ, यसरी प्रयोग गर्नुस् ! | तपाईंलाइ थाहा छ ? सोयाबीनमा दूध, अण्डा तथा मासुभन्दा धेरै प्रोटीन पाइन्छ, यसरी प्रयोग गर्नुस् ! – हिपमत
तपाईंलाइ थाहा छ ? सोयाबीनमा दूध, अण्डा तथा मासुभन्दा धेरै प्रोटीन पाइन्छ, यसरी प्रयोग गर्नुस् !
आज हामी तपाईले प्रयोग गर्ने केही पौष्टिक चीजबारे जानकारी दिँदै छौं जसलाई थाहापाएर तपाई छक्क पर्नुहुने छ ।सोयाबीन जसलाई आमरुपमा त्यति राम्रो तरकारीको रुपमा मानिदैन तर यसका फाइदा थाहा पाउनुभयो भने तपाई अचम्ममा पर्नुहुन्छ ।सोयाबीन को प्रयोग हाम्रो शरीरका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
सोयाबीनमा प्रोटीनको मात्रा धेरै हुन्छ भन भिटामि B र विटामिन E को मात्र प्रचुर ह्न्छ । जसले शरीरका लागि आवस्यक एमिनो एसिड को कमी पूरी गर्छ ।तपाईंलाइ थाहा छैन होला सोयाबीनमा दूध, अण्डा तथा मासुभन्दा धेरै प्रोटीन पाइन्छ ।
हड्डी बलिया हुन्छन्:सोयाबीन मा आइसोफ्लेवोंस नामक रसायन पाइन्छ । जसले विशेष गरेर महिलाको शरीरको हड्डिलाई कमजोर हुनबाट जोगाउँछ ।सिडिटीबाट राहत:यदी तपाईं एसिडिटी को समस्याबाट ग्रसित हुनुन्छ भने सोयाबीनको आटाको रोटी खान आवश्यक हुन्छ । जसले पेटलाई सफा राख्छ एसिडिटी की समस्या हट्छ ।
मानसिक संतुलन ठीक गर्छ:जो तनाव र मानसिक रोगबाट पीष्ति हुन्छन् उनीहरुका लागि सोयाबीन फाइदाजनक हुन्छ । यसकारण मानसिक रोगीले आफ्नो खानपिलनमा सोयाबीन खान आवश्यक छ । जसले दिमाग तेज बनाउँछ ।